Gareth Bale dartii oo loo badelay magaca gobolka Vale of Glamorgan…(Maxaa laga dhigay?)+SAWIRRO – Gool FM
Gareth Bale dartii oo loo badelay magaca gobolka Vale of Glamorgan…(Maxaa laga dhigay?)+SAWIRRO
Byare June 22, 2016
(France) 22 Juunyo 2016. Vale of Glamorgan ee dalka Wales ayaa magaceeda loo badelay xiddigooda Gareth Bale dartii.
Golaha deegaanka Vale of Glamorgan ee ku caanka ah beeraha iyo kiimikada dakaasi Wales ayaa badelay magaca gobolkaasi hal maalin uun iyagoona ka dhigay BALE of Glamorgan sababo ay ku sheegeen inay xulkooda nasiib wacan ugu rajeynayeen kulankii Ruushka oo ay saddexda gool uga adkaadeen.
Wales ayaa kulankoodii furitaanka 2-1 ku maray Slovakia, guul darro 2-1 ayay kala kulmeen xulka England kulankoodii labaad halka ay 3-0 ku xaaqeen xulka Ruushka kulankoodii ugu dambeeyay ee wareega group-ka B ee Euro 2016.
Xiddiga Real Madrid ayaana saddexda kulanba goolal ka dhaliyay taa oo ka dhigeysa inuu noqday laacibka ugu goolasha badan ebid taariikhda xulka Wales ee tartan wayn.
Waxayna taa dhalisay in lagu sharfo sheekadan oo Vale of Glamorgan loo badelo BALE of Glamorgan.
“Hal habeen oo quran waxaan nahay BALE of Glamorgan”. Sidaa ayay Twitter ku soo qoreen guddiga deegaankaasi Vale of Glamorgan.
Waxayna intaa raaciyeen: “Nasiib wacan Wales kulanka caawa ee Euro, wada jir ayaan ku si xoog badanahay.”.
Ma David Beckham ayaa dib loogaga yeeraa xulka? England oo 64-koorno midkood u badeli la’ gool!
Goolhayaha Crotia oo daaha ka rogay fariintii Luka Modric ugu soo dhiibay kabtankiisa ee lagu qabtay gool kul laadkii Sergio Ramos